Caalamka, 09 January 2019
Eedeysaneyaasha dilka Khaashuqji oo maxkamad lasoo taagay
Dacwad-oogayaasha Sacuudiga ayaa dil toogasho u dalban doono shan nin oo ku eedeysan dilka weriye Jamaal Khaashuqji, waxaa sidaas maanta werisay wakaaladda wararka dalkaas, ayada oo maanta ay maxkamad billowday dhageysiga dacwadaha 11 eedeysane.
Canada: Soomaalida iyo siyaasada dhiiri-gelinta ilmo-dhalista
Heerka sicir-bararka Turkiga oo hoos u dhacay
Heerka sicir-bararka dalka Turkiga ayaa bishii labaad oo xiriir ah hoos u dhacay bishii December, ayada oo ay caawisay canshuur dhimis iyo qiimaha badeecadaha oo hoos loo dhigay.
Muhaajiriintii u Badnaa oo Gaaray Spain 2018
Sida laga soo xigtay hay’adda muhaajiriinta Caalamiga ah ee IOM, dalka Spain ayaa qaatay 57, 250 qof, marka laga soo bilaabo bilowgii sanadka ilaa bishii December, 26keedii. Celcelis ahaan, waxay tiradu noqonaysaa 160 qof maalin walba
2018: Sanad aad ugu xumaa dhaqaalaha Dubai
Suuqa saamiyada Dubai ayaa maalinkii ugu dambeysay ee sanadii 2018 xirmay, ayada oo uu luumiyey 25% qiimahiisa, taasi oo ka dhigtay sanadkii ugu xumaa ee suuqa, tan iyo xasaradihii dhaqaale ee dunida ka dhacay toban sano ka hor.
Dhacdooyinka Caalamka ee 2018
Dhacdooyinka Caalamka ee 2018 waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandhere iyo Falastiin Axmed Iimaan, waxaanad ku maqli doontaan waxyaabihii ugu waaweynaa ee dunida ka dhacay sanadka sii dhamaanaya ee 2018